Dongguan Glory Star Laser Technology Co., LTD, pamwe Sino-German, kunyanya kufunga Laser michina & mafomu, pashure pemakore kuramba utsanzi uye kukura, rava kuzivikanwa pamwero mukuru akaigadzira Laser michina.
The kambani ane chemahofisi, R & D Building, machine chitoro, kupenda uye nomoto chitoro, vanoungana chitoro, showroom ano uye mwero fekitari maindasitiri.
Chekambani huru zvigadzirwa vari simbi Laser nokuveza michina, asiri simbi Laser nokuveza michina, Laser kupenda michina, Laser nomoto michina uye vachikotama machines.The wepagore kugadzirwa inokwana 8.000 seti mishonga inotengeswa munyika dzinopfuura 100 uye kumatunhu.
Kambani akaziviswa sezvo National yepamusorosoro zvebhizimisi, uye akaramba akahwina mabikirwo Innovation Award. Somutungamiri Laser zvokushandisa, Glorystar Laser zvemichina Co., Ltd ane rakakwana R & D maitiro, vane zvakawanda mudzimba mumayunivhesiti akakurumbira uye kutsvakurudza masangano kuramba ari pedyo Manyiminya uye zvekushandisa pamwe, ndiyewo Nanyang Institute of zvesainzi Graduate mudzidzi chawo.
Products akaita EU CE advertising uye SGS advertising, uye zvose zvine chokuita kuuya, muitiro, muchina, kutumirwa nezvimwe zvaidiwa ISO yepamusoro uye Environmental Management gadziriro Kutarisira mirayiridzo kuitira kuti nyika yepamusoro. Akatakura Global maonero kuona, GLORYSTAR anoramba kufunga kuti Laser zvesainzi kugoverana nemi mune ramangwana zvinobudirira!